Anaty krizy ny fitondrana Voadaka ny minisitra Vonjy Andriamanga
Naina Andriantsitohaina “ Lazao fa mpandainga aho fa tsy olana…”
Nafana ny resaka nandritra ny fanokafana ny fivorian’ny mpanolotsain’ny kaominina Antananarivo natrehin’ny ben’ny tanàna Atoa Naina Andriantsitohaina omaly.
Avaradrano Vita ny lalana amina kaominina maro
Nanao fitsidihana ara-teknika tany amin'ireo asa rehetra nataon` ny ekipan'ny Faritra Analamanga omaly tany amin` ny distrikan` Avaradrano.
Orinasa AAA Efa nihoarana lavitra ilay fanakatonana 15 andro
40 andro mahery izay no nanombohan’ny fanakatonana ny orinasa AAA niainga tetsy Behoririka ny 19 aogositra, nitohy tany Toamasina ny 27 aogositra, Andranomanelatra ny 01 septambra, ary tany Fianarantsoa ny 02 septambra.
Régis Ramamonjisoa “Efa te hitroatra ny vahoaka”
Matoa ny zava-misy ankehitriny miha mafana dia misy mampirehitra, hoy ny filoha lefitry ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara, sampana Mahajanga, Régis Ramamonjisoa.
Demokrasia sy ny fampandrosoana Mikatri-doha ireo Parlemantera SADC
Mandray anjara amin` ny « Forum parlementaire de la SADC » ny solombavambahoakan’i Madagasikara.
VMMF sy raharaha “Ecran plat” “Aoka tsy ho vary mangatsiaka ny fitorianay ”
Iray volana izay no nametrahanay fitoriana teo anivon’ny Fitsarana avo na HCJ sy ny sampan-draharaha misahana ny kolikoly na PAC mikasika ny raharaha “écran plat” teo anivon’ny CCO, hoy ry zareo avy eo anivon’ny Vovonana Malagasy manarina firenena na VMMF, tetsy Mahamasina omaly.
Politika Rahoviana vao hisy mpanohitra tena ofisialy ?
Mbola tsy nisy ny mpanohitra ofisialy raha ny tantaran`i Madagasikara no zohina. Raha tamin`ny andron` ny Repoblika faharoa, nampandany ny lalàmpanorenana vaovao tamin’ny desambra 1975 ny filoha Ratsiraka.
Araka ny efa nanampoizana azy, taorian’ny fametraham-pialan’ny tale jeneralin’ny Ofisy Malagasy misahana ny akoranafo (OMH)
afak’omaly dia nesorina tamin’ny toerany ihany koa omaly hariva ny minisitry ny angovo sy ny rano ary ny akoran’afo Atoa Vonjy Andriamanga. Ny olana teo amin’ny fikorontanan’ny famatsiana sy fitsinjarana ny solika no re fa anton’izao fanapahan-kevitra noraisin’ny governemanta izao. Eo ihany koa moa ny olana miverimberina amin’ny fahatapahan’ny herinaratra sy ny famatsiana rano eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina izay samy eo ambany fiahian’ity minisitra ity avokoa. Hoy indrindra ny tati-baovaon’ny filankevitry ny minisitra natao omaly : “Araka ny didim-panjakana noraisin’ny filoham-pirenena avy amin’ny tolo-kevitry ny praiminisitra dia nesorina tsy ho eo amin’ny toeran’ny minisitra misahana ny angovo, ny rano ary ny akoranafo intsony Atoa. Vonjy Andriamanga ka ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra Atoa. Christian Ramarolahy no misolo vonjimaika ny toerany”. Tranga izay manaporofo hatrany ny efa notaterina teto amin’ny gazety fa mikorontana ny fitantanan-draharaham-panjakana eto Madagasikara ary tsy mety mahita ny vahaolana tena mahomby ny mpitondra ka mba hanatsaratsarana ny sary dia tsy maintsy manala tompon’andraikitra aloha. Olana saro-bahana anefa ny resaka solika eto Madagasikara, tsy vitan’ny fanapahan-kevitra kimaimaika fa misy olana fototra mila fantarina izay vao mitondra vahaolana mahomby.Raha ny fahafantarana azy dia niezaka nikaroka io vahaolana io ny minisitra teo aloha Vonjy Andriamanga, saingy toa ezaka nandeha ila ihany ny azy noho ny tsy fisian’ny firaisankina eo amin’ny governemanta, toa samy maka ho azy izany ireo minisitra. Ny praiminisitra aza moa efa ho iray volana aty aorian’ny olana maro lafy vao miteny kely. Mbola fanontaniana manitikitika ny maro anefa taorian’izao fanesorana ny minisitry ny angovo izao ny hoe : hivaha amin’izay ve izany ity olan’ny solika ity ? Ahoana ny momba ireo kaompania telo lehibe (LPSA, Total, Shell) nosaziana handoa lamandy ? Manaiky izany ve izy ireo sa hitondra ny raharaha eny anivon’ny fitsarana ? Tsara homarihana ihany koa fa minisitra roa izany izao no efa niala tao anatin’ny governemanta, dia ny minisitry ny raharaham-bahiny Naina Andriantsitohaina izay kandida ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra ka ny praiminisitra no misahana vonjimaika ny asany. Faharoa, ny minisitry ny angovo Vonjy Andriamanga. Mpisolo toerana ihany koa no hisahana ny fampandehanan-draharaha ao amin’ny minisitera notantaniny. Tsy takon’afenina intsony fa mandalo krizy ihany koa ny fitondam-panjakana.